Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Kelley Slagle | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Kelley Slagle
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Kelley Slagle
Kelley Slagle (isha: Sawirka Roy Cox)
2019 NAB Show New York Profiles waa wareysiyo isdaba joog ah oo lala yeelanayo xirfadlayaal caan ah oo ka tirsan warshadaha baahinta kuwaas oo ka qeyb qaadanaya sanadkan NAB Show New York (Oct. 16-17).
Kelley Slagle waa soo saare fiidiyaha ah iyo tifatiraha tababarka, warshadaha, iyo dukumiintiyo dukumiinti ah oo loogu talagalay macaamiisha shirkadaha iyo kuwa aan macaash doonka aheyn oo ay ku jirto LinkedIn Learning, Canon, FINRA, iyo Adorama. Kelley waa qof ku hadla munaasabadaha warshadaha oo ay ka mid yihiin NAB Show oo waa qoraa laba fasal oo ku saabsan barashada LinkedIn. Waxay ahayd kaaliye ku-xigeenka tifaftiraha National Geographic waxayna sanadihii 12 sano ku qaadatay horumarinta barnaamijyada kombuyutarka Qaranka. Kelley sidoo kale waxay hagtaa, soosaaraa, isla markaana tafatirisaa abaalmarinta guuleysiga sheeko madax-bannaan iyo filimaan dokumentiyo leh shirkadeeda, Cavegirl Productions. Waxaad waxbadan ka baran kartaa Kelley iyo Cavegirl Production at godgirl.com.
Waxaan dhawaan helay fursad aan ku wareysto jilaaga iyo soosaaraha Kelley Slagle, anigoo ka bilaabaya sida ay xirfaddeeda ku shaqeyso u oggolaanayso danaheeda filimada. Waxaan bilaabay jilista tiyaatarka bulshada sanadkii 2000, markii dambena waxaan u wareegay tiyaatarro xirfadeed oo yar yar oo ku yaal DC. Isla mar ahaantaana, waxaan bilaabay inaan ka helo qaybo aan ka tirsanayn ururrada filimada maxalliga ah ee madaxbannaan. Tani waxay u gudubtay qaybo waaweyn filinka indie, taxanaha webka, iyo warshadaha, aakhirkiina waxaan noqday jilaa SAG-AFTRA oo door ku leh TV-ga iyo filimka. Labadaydii door ee aan ugu jeclaa xirfadayda masraxa iyo kuwa aan ku faani jiray ayaa ahaa kaalintii Josie ee Dayax Madoobaa waxaa qoray Eugene O'Neill, iyo doorka Hester Swane ciyaarta Eebe wuxuu ku dhaartay Caanka Bisadaha Waxaa qoray Marina Carr. Labaduba waxay ahaayeen loollan door hoggaamineed leh lahjadaha Irish, oo leh safarro qiiro leh oo qiiro leh.
Intii aan jilaa ka ahaa filimka madaxa bannaan, waxaan xiiseynayay wixii ka dambeeyay kamaradda iyo waxa ka dhigay shil. Waxaan ahaa Jilaa Filinka Mashruuca Filimka ee 48 Saac48hourfilm.com] waxaanan ku raaxeystay howsha sameynta filim gaaban ee usbuuc dhammaadka usbuuca aad ayaan u go aansaday inaan sameeyo kooxdayda 48HFP ee sanadka soo socda, anigoo naftayda ahay soo-saare / agaasime. Waxay ahayd seenyada ugu fiican in lagu dhufto dhulka orodka oo la barto aasaaska filimada. Tani waxay ahayd bilawgii Soosaarida Cavegirl, waxaanan sii wadnay inaan samayno filimada 12 sanadihii la soo dhaafay ee loogu talagalay 48HFP. Waxaan sameynay filimo badan oo gaagaaban sanadihii aan si qaas ah ugu raaxeysanayay aadna ugu qanacsanahay dhammaadka wax soo saarka, oo ay kujirto iskaashi xagga xuquuqda puppet ah, filim duugsi cirfiid ah oo ka warramay aragtida cirfiidka, iyo mid ka sheekeeyay shaqooyinka laga heli karo inta lagu guda jiro aaladda loo yaqaan 'zombie apocalypse'.
Filimkeenii ugu horreeyay oo muuqaal ah Dice iyo Ragga wuxuu ahaa sheeko ku saabsan jilayaasha jilitaanka iyo saaxiibtinimadooda, wuxuuna ku guuleystay dhowr dabaal filim iyo abaalmarino kale. Wax soo saarkii ugu dambeeyay waa dokumenti Isha Aragtida: Farshaxanka Dungeons & Dragons, kaas oo baaraya taariikhda & sheekooyinka ka dambeeya fanka ee gacan ka gaystay abuurista ciyaarta doorka adduunka ugu caansan. Waxay sidoo kale ku guuleysatay abaalmarino ku saabsan wareegga xafladaha filimka waxayna ku baahisay qaybo badan oo gundhig ah, oo ay ku jiraan iTunes iyo Amazon.
Intii aan jilaayey iyo filimada galbihii iyo sabtiyada iyo axadaha, waxaan la qaatay 12 sano Raadiyaha Dadweynaha Qaranka anigoo ah horumariye websaydh iyo falanqeeye QA oo ka shaqeynaya keydkooda barnaamijyadooda, Kaydinta Mawduucyada. Kadib waxaan go aansaday in aan sii wato xirfad ku shaqeynta aflaamta oo waxaan bilaabay tababar ku saabsan National Geographic, waxaana ku soo qaatay khibrad muhiim ah oo ah Kaaliyaha Tifatiraha Fiidiyaha ee Aruurintooda Sawirka muddo sanad ah. ”
Waxaan weydiiyay Slagle sida ay ugu lug yeelatay NAB. Intii aan ka shaqeynayay shirkadda isgaarsiinta ee RHED Pixel, waxaa i weydiistay Rich Harrington in aan ka caawiyo in cashar lagu baro NAB Show ee Vegas ku saabsan sida loo maareeyo kanaalkaaga YouTube. Tani waxay horseed u tahay wada hadallo kale oo lala yeesho NAB, ugu dambeyntiina lagu daro fasallo ku saabsan soo saarista filim madaxbannaan, isku soo uruurinta, hagista jilayaasha iyo kuwa aan jilayaasha ahayn, iyo soosaarida iyo tafatirka dokumenteriga ah. Kahadalka NAB waxay ahayd fursad isku xirnaan qiimo leh waxayna horseeday xiriiro iyo fursado badan oo xirfadlayaal ah, oo ay weheliso soo-gaadhista waxa ugu wanaagsan ee warshaduhu bixin karaan. ”
Slagle waxay qaban doontaa laba aqoon isweydaarsi, "Crowdfunding Your Independent Film" iyo "Helitaanka Waxqabadka ugu Fiican: Jiheynta Jilayaasha iyo Jilayaasha Aan Jilayaasha ahayn," bisha soo socota NAB Show New York. Soo bandhigiddayda 'Crowdfunding Your Independent Film' waxaa loogu talagalay bilowga iyo horumarsan sheekooyinka indie iyo soosaarayaasha filimada dokumenteriga ah ee raadinaya istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee adeegsiga barxadaha caanka ah ee dadka badan ay ku maalgeliyaan mashaariicdooda. Waxaan dabooli doonaa barnaamijyada lagula taliyay, raadinta iyo baaritaanka dhagaystayaashaada, qorshaynta ololahaaga, jabinta miisaaniyaddaada, abuurista olole fiidiyoow, bixinta abaalmarino iyo abaalmarinno, socodsiinta ololahaaga, iyo raacitaanka iyo ka-qaybgalayaasha oo faraxsan.
“'Helitaanka Waxqabadka ugu Fiican: Jiheynta Jilayaasha iyo Jilayaasha Aan Jilayaasha ahayn' waxaa loogu talagalay soosaarayaasha iyo agaasimayaasha ka shaqeeya dhinacyo badan, oo ay ku jiraan sheeko, dokumenti dokumenti, iyo soosaarka fiidiyowga shirkadaha. Koorsadu waxay daboolaysaa jilitaanka, diyaarinta, isgaarsiinta, tababarka, waxqabadka, talooyinka toogashada, maareynta dadka aan jilayaasha ahayn, iyo la talinta xaaladaha gaarka ah, sida wareysiyada dukumiintiga ah, la shaqeynta saamaynta gaar ah, iyo la shaqeynta carruurta.
Slagle waxay haysataa wax badan inay ku mashquuliso mashquulkeeda kadib NAB Show New York sidoo kale. "Waxaan hadda u shaqeynayaa sidii soo saare waxyaabaha tababarka ee NGP VAN, oo ah hogaamiyaha teknoolojiyadda ee ololaha dimuqraadiga iyo horumarka, waxaanan ku jiraa wax soo saarka Cavegirl Productions documentary soo socda, fiiri ciyaarta kaarka ganacsiga ugu caansan, Iska indho tirka farqiga - Sheekada sixirka: Soo uruurinta. "
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2019 NAB Show New York Mashruuca Filimka 48 saac Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Idaacadan Convention Broadcasting Convention Waxsoosaarka Cavegirl Kelley Slagle NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB16 nabshow National Geographic NPR 2019-10-15
Previous: Soo Gudbinta Mawduuca & Isbahaysiga Amniga waxay Bilaabaysaa Bisha Ilaalinta Mawduuca iyada oo ay la jirto Bob Gold & Associates
Next: Nidaamka Smart-Way ee FSR wuxuu Joojiyaa Bandhigga inta lagu jiro NECA 2019